SONATA-CANTATA: Of Studies - Francis Bacon
Francis Bacon (1561-1626) ၏ “of Studies” အက်ဆေးကို ဆရာမြသန်းတင့်၏ မြန်မာဘာသာပြန်နှင့် တွဲဖက်ဖော်ပြထားပါသည်။
စာပေလေ့လာခြင်းသည် စိတ်နှလုံးကို ကြည်နူးစေ၏။ အဆင်အယင်ကို ဖြစ်စေ၏။ အရည်အချင်းကို တိုးစေ၏။
စာပေကို လေ့လာဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် အထီးတည်း နေထိုင်စဉ်နှင့် အနား ယူစဉ်တွင် စိတ်နှလုံးကို ကြည်နူး စေနိုင်ပါသည်။ စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် စကားပြောရာတွင် အဆင်အယင် ဖြစ်စေပါသည်။ စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချင့်ချိန်ခြင်းနှင့် အလုပ်တို့ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြုရာတွင် အရည်အချင်းတို့ကို တိုးတက် စေနိုင်ပါသည်။
တတ်ပွန်ကြေညက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမူ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တို့ကိုလည်း တစ်ခုချင်း နှိုင်းချိန်စဉ်းစားတတ်ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် သာမန်လူများမှာမူကား တိုင်ပင် နှီးနှောရပါသည်။ အကြံအစည်များ၊ အရာကိစ္စတို့ကို စီမံပုံများသည် ပညာရှိတို့ထံမှသာ အကောင်းဆုံး ရရှိတတ်ပါသည်။
စာပေလေ့လာမှုတွင် အချိန်ကို များစွာအသုံးချခြင်းသည် လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေပါသည်။ ထိုအဆင် အယင်အတွက် စာပေလေ့လာမှုကို အလွန်အမင်း ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပလွှားဟန်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာပေ လေ့လာမှုတို့ကိုချည်း အားကိုး၍ ဆုံးဖြတ်နှိုင်းချိန် စဉ်းစားခြင်းသည် ပညာရှိတို့ကို ရယ်ဖွယ် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
စာပေလေ့လာမှုသည် သဘာဝကို ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးပြီး၊ အတွေ့အကြုံက တစ်ဖန်ပြန်၍ စာပေလေ့လာမှုကို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးပါသည်။ သဘာဝ အရည်အချင်းတို့သည် သဘာဝ ပေါက်သော သစ်ပင်များနှင့် တူပါသည်။ အပင်တို့မှ အကိုင်းအခက်တို့ကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရန် လိုသကဲ့သို့ သဘာဝ အရည်အချင်းတို့ကိုလည်း လေ့လာမှုဖြင့် ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းပစ်ရန် လိုပါသည်။ လေ့လာမှုသည် သူ့ပင်ကိုယ် သက်သက်အတိုင်း ဆိုလျှင် ထွေပြားလှသည့်အတွက် ထိုလေ့လာမှုကို အတွေ့အကြုံဖြင့် ထိန်းကွပ်ပေးရန် လိုပါသည်။
ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသူတို့သည် လေ့လာမှုကို ရှုတ်ချ ပြစ်တင် ကြပါသည်။ ရိုးသားသူတို့ကား လေ့လာမှုကို နှစ်သက် သဘောကျကြပါသည်။ ပညာရှိသူတို့ကား လေ့လာမှုကို အသုံး ချကြပါသည်။ လေ့လာမှုများသည် သူတို့ကို အသုံးပြုရန် သင်ကြားခြင်း မပြုပါ။ သို့ရာတွင် လေ့လာမှုမရှိဘဲ စဉ်းစားဆင်ခြင် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီဆိုလျှင်ကား ထိုအရာသည် ဉာဏ်ပညာ မည်ပါသည်။
ငြင်းခုံရန်နှင့် ငြင်းပယ်ရန် စာဖတ်ခြင်း မပြုပါလေနှင့်။ ယုံကြည်ရန်နှင့် သူများ ပြောသမျှကို လက်ခံရန်လည်း စာဖတ်ခြင်း မပြုပါလေနှင့်။ စကားကြီး စကားကျယ် ပြောရန်နှင့် ဆွေးနွေးရန်လည်း စာဖတ်ခြင်း မပြုပါလေနှင့်။ နှိုင်းချိန်ရန်နှင့် တွေးတောရန် အတွက်သာ စာဖတ်ခြင်း ပြုပါလေ။
အချို့စာအုပ်တို့သည် မြည်းစမ်းကြည့်ရန် ဖြစ်၏။ အချို့ကား မျိုချရန် ဖြစ်၏။ အနည်းငယ်သော စာအုပ်တို့မှာ သာလျှင် ကြေညက်အောင် ဝါး၍ အစာချေရန် ဖြစ်၏။ တစ်နည်း ပြောရလျှင် အချို့သော စာအုပ်တို့သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာ ဖတ်ရန် ဖြစ်၏။ အချို့စာအုပ်များကား သာမန်ဖတ်ရုံသာ ဖြစ်၏။ အနည်းငယ်သော စာအုပ်တို့သာလျှင် လုံ့လ၊ ဝီရိယ၊ သတိ အာရုံစိုက်မှု တို့ဖြင့် အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဖြစ်ပေ၏။
အချို့စာအုပ်များကား ကိုယ်စားဖြင့်သာ ဖတ်အပ်သော စာအုပ်များ ဖြစ်၏။ အခြားသူများ ထုတ်နှုတ်ပေးသော အချက်များကိုသာ ဖတ်အပ်၏။ သို့ရာတွင် ထိုစာမျိုးမှာ အရေးမကြီးသော အကြောင်းများနှင့် ညံ့ဖျင်းသော စာအုပ်များသာ ဖြစ်သင့်၏။ ပေါင်းခံ စာအုပ်များသည် ပေါင်းခံရေကဲ့သို့ပင် ဟိတ်ဟန်များသောအရာ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။
စာဖတ်ခြင်းသည် ပြည့်ဝသော လူတစ်ယောက် ဖြစ်စေ၏။ တိုင်ပင်နှီးနှော ခြင်းသည် ကျယ်ပြန့်သော လူတစ်ယောက် ဖြစ်စေ၏။ စာရေးခြင်းသည် တိကျသော လူတစ်ယောက် ဖြစ်စေ၏။
ထို့ကြောင့် စာရေးနည်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် ကြီးသော မှတ်ဥာဏ်ရှိဖို့ လိုပါသည်။ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှု နည်းလျှင် ဇဝနဥာဏ်ရှိ ဖို့လိုပါသည်။ စာဖတ်ခြင်း နည်းလျှင် ပါးနပ်မှု ရှိဖို့ လိုပါသည်။
Histories make men wise; poets witty; the mathematics subtile; natural philosophy deep; moral grave; logic and rhetoric able to contend. Abeunt studia in mores [studies develop into habits].
ရာဇဝင်များသည် လူများကို ပညာရှိစေပါသည်။ ကဗျာဆရာများကား လူများကို ဇဝနဉာဏ် ထက်သန် စေပါသည်။ သင်္ချာဆရာများသည် လူများကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စေပါသည်။ ဒဿနပညာသည် လူကို လေးနက်စေပါသည်။ နီတိပညာသည် လူကို တည်ကြည်စေပါသည်။ ယုတ္တိဗေဒနှင့် နှုတ်မှုပညာသည် လူကို ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စေပါသည်။
Nay, there is no stond or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies; like as diseases of the body, may have appropriate exercises.
ဇဝနဉာဏ်တွင် အတားအဆီး အရပ်အတန့် ဟူ၍ မရှိပါ။ လေ့လာမှုကြောင့်သာ ပျက်စီး သွားနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ဖြစ်သော ရောဂါတို့ အတွက် သင့်လျော်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ ရှိသည့် နည်းတူ ဖြစ်ပါသည်။
ဘောလုံး လှိမ့်ကစား ခြင်းသည် ကျောက်တည်ခြင်းနှင့် အကြောများအတွက် ကောင်းပါသည်။ သေနတ် ပစ်ခြင်းသည် အဆုတ်နှင့် ရင်ဘတ်အတွက် ကောင်းပါသည်။ ဖြည်းညင်းစွာ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ဝမ်းဗိုက်အတွက် ကောင်းပါသည်။ မြင်းစီးခြင်းသည် ခေါင်းစသည်တို့ အတွက် ကောင်းပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူတစ်ယောက်၏ စိတ်သည် အတည်မနေ ထွေပြားလျက် ရှိပါက သင်္ချာကို လေ့လာသင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်္ချာ တွက်ရာတွင် စိတ်အာရုံကို စုစည်းခြင်း မပြုနိုင်ပါက အစမှ ပြန်ထွက်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the Schoolmen; for they are cymini sectores [hairsplitters, literally cumin-seed sorters].
သူ့စိတ်သည် ခြားနားချက်ကို မခွဲခြားနိုင်ပါက သို့မဟုတ် မတွေ့ပါက ကျောင်းဆရာကို အတုယူသင့်ပါသည်။
If he be not apt to beat over matters, and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyers' cases. ပြဿနာများကို မဖြေရှင်းနိုင်လျှင် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို သက်သေမထုတ်နိုင်လျှင် ရှေ့နေ၏ အမှုတွဲများကို လေ့လာသင့်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်စိတ်၏ ချွတ်ယွင်းချက်အတိုင်းအတွက် အထူးဖြေဆေး တစ်ခုစီ ရှိတတ်ကြသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
(ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း၊ ဩဂုတ် ၂၀၁၀)
မြန်မာအက္ခရာ သံပေါက်ကဗျာ သမိုင်း